Iyi ndiyo isina waya yekuongorora hwaro hweApple Watch Series 7 | IPhone nhau
Ngirozi Gonzalez | 16/10/2021 16:43 | Apple Watch, Noticias
Mazuva mashoma apfuura takakuudza kuti ekutanga mauniti eApple Watch Series 7 asvika kune vezvenhau. Uye vamwe vanoshandisapakuongorora kwavo kwakadzama, ivo vaive vaziva iyo kubviswa kwechitsigiro chemuviri chirwere chekuongorora yeiyo itsva Apple wachi. Pane kudaro, kuongororwa kwakaitwa muApple Stores kunoitwa kuburikidza ne nyowani isina waya yekuongorora hwaro iyo yakashanda mukuwandisa kwe60.5 GHz. Iye zvino tava kuona iyo yekutanga mifananidzo yechigadziko ichi, yakaburitswa kuburikidza nesangano rekuBrazil rekutaurirana.
Apple inoshandisa isina waya yekuongorora hwaro hwekutsigira
Iyo nyowani yekuongorora base yeiyo nyowani Apple Watch Series 7 inotsanangurwa semuenzaniso A2687. Kusvika parizvino, Big Apple wachi dzinovanza doko rekutsigira rakabatana neApple masisitimu muzvitoro zvepanyama. Uine kubatana uku, unogona kuseta zvakare chishandiso, kumisazve watchOS, uye nehunyanzvi kuongorora izvo zvinogona kuitika kuchinhu.
El Apple Watch Series 7 inomira ichisanganisira ichi chiteshi chemuviri kugadzira nzira ye isina waya kufambisa data. Uku kuchinjisa kunoitwa kuburikidza neiyi isina waya yekuchaja base yatiri kutaura nezvayo. Inongoshandiswa chete mukati mebasa uye inoshanda kuburikidza nehunyanzvi hwe60,5 GHz.Gadziko rine zvidimbu zviviri sezvaungaona mumufananidzo unotungamira chinyorwa. Iyi mifananidzo yakaburitswa kuburikidza Anatel, kambani yekutengesa mafoni iri muBrazil.
Apple inobvisa chiteshi chekuongorora kubva kuApple Watch Series 7
Chikamu chezasi chinotakura hwaro hwekuchaja nejaja yemagineti uye chiteshi che USB-C chinobatana nehurongwa hweapuro hombe. Kune rimwe divi, iyo yekumusoro chikamu inobvumidza iko kusungwa kweiyo wachi nekuigadzirisa. Kubatana pakati pemagineti base uye bracket kunotendera ita ese marudzi ehunyanzvi diagnostics munzvimbo dzakachengeteka kuburikidza nehurongwa hwakagadzirwa neApple, senge zvitoro zvepanyama kana mvumo yechitatu mapato.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyi ndiyo isina waya yekuongorora hwaro hweApple Watch Series 7
Monument Valley 2 yakagadziridzwa kuwedzera zvinyorwa zvitsva